Kuratidza zvinyorwa neelebheri Kukadzi
Karenda yeEMBA Ndira munaJanuary 2020
EMBA Zviri Czech kambani ine tsika refu uye mutoro nzira kuti nzanga uye zvakatipoteredza. Organic zvigadzirwa awo akabereka nokubata tsvina bepa uye zvachose recyclable. Kuburikidza zvinhu zvayo EMBA kunoitawo kuti kudzivirirwa uye kuchengetedzwa nhaka nemagariro uye nhoroondo munyika dzakawanda. Sechinhu chikuru remunharaunda mushandirwi anoona basa raro pave kutsigira uye njodzi kushanda mamiriro vashandi vayo, uyewo kuita kuti mupiro kuna munzanga nokugarika mudunhu.
Kutanga kweiyo pasteboard fekitari muPaseky nad Jizerou yakadzoka kubva 1882, apo hama dzeRössler dzakatanga fekitari yekugadzira chena yakagadzirwa nemakadhi kadhibhodhi ekutakura zvigadzirwa zveindasitiri yegirazi mudunhu reJablonec. Iyo imwezve nguva yekuenderera mberi kwehupenyu hwekambani inoonekwa nekuwedzera kwechirongwa chekugadzira uye nzvimbo yekugadzira. Akakosha madhizaiki munhoroondo yepasiribhodhi chirimwa kunyanya kuiswa kwemishini yekurongedza mabhokisi mumakore ekuma1970 na1989, iyo yakaunza…
Karenda yaJanuary naFebruary 2020 Dhebhiri
Matongo eTrosky castle ari pamusoro pegomo rezita rimwe chete (488 m), mumusha weTroskovice mudunhu reSemily mudunhu reLiberec. Iyo iri panharaunda yeBohemian Paradise Yakachengetedzwa Landscape Area pamwe neBohemian Paradise Geopark, iyo muna 2015 ndiyo yekutanga yerudzi urwu kubva kuCzech Republic kuiswa muUNESCO yepasi rese geopark network. Imba iyi ndeye yeyenyika (inotungamirwa neNational Heritage Institute) uye yakavhurirwa veruzhinji.